ကျောင်းသားတစ်ဦးရဲ့ မဆင်ချင်မှုကြောင့် မကြာခင် ဂျန်ပန်ကို ပညာတော်သင်သွားမည့် သင်တန်း ဆရာမလေး အသက်ဆုံးခဲ့ရပြီ .. - Tameelay
ကျောင်းသားတစ်ဦးရဲ့ မဆင်ချင်မှုကြောင့် မကြာခင် ဂျန်ပန်ကို ပညာတော်သင်သွားမည့် သင်တန်း ဆရာမလေး အသက်စွန့်ခဲ့ရပြီ
မိမိရဲ့မဆင်ချင်မှုကြောင့် တဦးတယောက်တင်မဟုတ်ဘဲ တိုင်းပြည်အတွက်ပါစိတ်မကောင်းစရာ ဖြစ်ရပါသည်
မကြာခင် ဂျန်ပန်နိုင်ငံ သို့ ပညာတော်သင်သွားမည့်ဂျပန်စကားပြောသင်တန်း ဆရာမလေး ကို …
မန္တလေးမြို့ GTC ကျောင်းသားတစ်ဦးအရက်မူး၍မောင်းနှင်းလာသောကား မှ ၅၈ လမ်းယောမင်းကြီး လမ်း တွင်
ဆရာမလေး ဆိုင်ကယ်အားဝင်ရောက်တိုက်မိရာမန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ရောက်ရှိပြီးမကြာခင်သေဆုံးသွားကြောင်းသိ ရှိရပါတယ်။
ဆရာမလေး က ၇ လပိုင်းတွင်ဂျပန်နိုင်ငံသို့ပညာသင်ကြားရန် သွားရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်
အမိ့နိုင်ငံ အတွက် ထူးချွန်ထက်မြတ်သော လူငယ်များယ္ခု့လိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးဖြင့်ဆုံးရှုံးရသည်မှာအလွန်ဝမ်းနည်းဘွယ်ရာတခုပါ
ဒါကြောင့် ကားမောင်းကြသူအပေါင်း မှ မဖြစ်သင့်တာ မဖြစ်ရလေအောင် ဂရုပြု့သင့်ပါတယ် ခင်ဗျာ
Credit – ဆား ပုလင်းစုံထောက်ကြီး
ကြောငျးသားတဈဦးရဲ့ မဆငျခငျြမှုကွောငျ့ မကွာခငျ ဂနျြပနျကို ပညာတျောသငျသှားမညျ့ သငျတနျး ဆရာမလေး အသကျစှနျ့ခဲ့ရပွီ
မိမိရဲ့မဆငျခငျြမှုကွောငျ့ တဦးတယောကျတငျမဟုတျဘဲ တိုငျးပွညျအတှကျပါစိတျမကောငျးစရာ ဖွဈရပါသညျ
မကွာခငျ ဂနျြပနျနိုငျငံ သို့ ပညာတျောသငျသှားမညျ့ဂပြနျစကားပွောသငျတနျး ဆရာမလေး ကို …
မန်တလေးမွို့ GTC ကြောငျးသားတဈဦးအရကျမူး၍မောငျးနှငျးလာသောကား မှ ၅၈ လမျးယောမငျးကွီး လမျး တှငျ
ဆရာမလေး ဆိုငျကယျအားဝငျရောကျတိုကျမိရာမန်တလေးပွညျသူ့ဆေးရုံကွီးသို့ရောကျရှိပွီးမကွာခငျသဆေုံးသှားကွောငျးသိ ရှိရပါတယျ။
ဆရာမလေး က ၇ လပိုငျးတှငျဂပြနျနိုငျငံသို့ပညာသငျကွားရနျ သှားရောကျမညျဖွဈကွောငျးသိရပါတယျ
အမိ့နိုငျငံ အတှကျ ထူးခြှနျထကျမွတျသော လူငယျမြားယ်ခု့လိုအဖွဈဆိုးမြိုးဖွငျ့ဆုံးရှုံးရသညျမှာအလှနျဝမျးနညျးဘှယျရာတခုပါ
ဒါကွောငျ့ ကားမောငျးကွသူအပေါငျး မှ မဖွဈသငျ့တာ မဖွဈရလအေောငျ ဂရုပွု့သငျ့ပါတယျ ခငျဗြာ
Credit – ဆား ပုလငျးစုံထောကျကွီး
မြန်မာပြည်က အမှိုက်မရှိတဲ့ ရွာကိုတွေ့ပြီ
မြန်မာပြည်က အမှိုက်မရှိတဲ့ ရွာကိုတွေ့ပြီ အမှိုက်မရှိတဲ့ ရွာကိုတွေ့ပြီကွာ။ အိပ်မက်များလားလို့တောင် ထင်မိတယ်။ တကယ်ကြီးပါဗျာ။ ကျောက်တန်းကနေ ၉. မိုင်ခွဲဝင်ရသေးတယ်။ ရွာနာမည်က. ဝဲကြီးရွာ တဲ့။ ကဗျာမဆန်ပေမဲ့ ပနံရတဲ့ရွာပေါ့ ။ အိမ်တိုင်းမှာအမှိုက်အိတ်လေးတွေ ရှိသလို လမ်းဘေးမှာလဲ အမှိုက်ခြင်းတွေရှိတယ်။ ထွက်လာတဲ့အမှိုက်ကို စွန့်ပစ်ဘို့ စနစ်သတ်မှတ်ထားတာကိုက ရွာရဲ့အဆင့်အတန်းပဲ။ …
ဝမ်းသာစရာပဲဗျာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မြန်မာ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦး ထိုင်းထီ ဘတ်(၆သန်း) ပေါက် :O
ထိုင်းထီပထမဆု ဘတ်(6)သန်းဆုရှင် မြန်မာလုပ်သား ဇနီးမောင်နှံမှ AAC အဖွဲ့ထံ ငွေထုတ်ပေးရန် အကူအညီတောင်းရာ AAC မှ ငွေထုတ်ယူပေးခဲ့ 1-8-2018 ရက်နေ့ထွက် ထိုင်းထီပထမဆုကြီး ပေါက်ခဲ့သော မြန်မာလုပ်သားဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦး ဟာ ထီပေါက်ဆိုတာ သေချာပြီဆိုတာနဲ့ AAC အဖွဲ့ထံသို့ ချက်ချင်းဆက်သွယ်လာရောက်ပြီး ယုံကြည်စွာအားကိုးစွာဖြင့် ထီပေါက်သော ဆု …
ပေါင်တစ်သန်းကျော်တန်ဖိုးရှိ အဝတ်ဗီရိုနဲ့ တစ်လကိုပေါင်ငါးထောင်ကျော်မုန့်ဖိုးရနေတဲ့ ကံအကောင်းဆုံး အဖေချစ်သမီးလေး
နာမည်ကျော်ဒီဇိုင်နာချုပ်အိတ်တွေ၊ပေါင်လေးသိန်းကျော်တန်တဲ့ Fabergé လက်စွပ်၊ ပေါင်သန်းပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိတဲ့ လက်ဝတ်ရတနာတွေ၊ တကယ့် ထိပ်တန်း ကမ္ဘာကျော် Branded ဖိနပ်တွေ၊ ကောင်းပေ့ဆိုတဲ့ မိတ်ကပ်အသုံးအဆောင်တွေ…. ဒါတွေဒါတွေရဲ့ပိုင်ရှင်ဟာ ဘယ်သူလို့ထင်ပါသလဲ။ နာမည်ကျော်အဆိုတော်တွေ Hollywood က ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေ မဟုတ်ရပါဘူး။ ခုမှ အသက် 18 ကိုပြည့်လုပြည့်ခင်လေးရှိတဲ့ Saffron ဆိုတဲ့ …